Mogadishu Journal » 2022 » January » 14
//January 14, 2022
Klopp ayaa isha ku haya abaal marinta
Jurgen Klopp ayaa ku adkeystay fikirka 350-kulan maadaama uusan maamulaha Liverpool maskaxdiisa geli doonin marka uu gaaro calaamadda kulanka Reds ee Brentford. Klopp ayaa ku riyaaqay guulo waaweyn tan iyo markii uu la wareegay 2015, isagoo gaaray labo final oo Champions League...
Latest recommendations prompt new calls for patent waivers to allow more people access to treatments. The latest recommended drugs are able to reduce the risk of hospital admission for the most vulnerable patients [File: Joseph Prezioso/AFP] Published On 14 Jan 202214 Jan 2022...
Gov’t lawyer said Djokovic would not be detained before interview with immigration officials on Saturday morning and he would not be deported before his case is heard. Djokovic’s exemption from a COVID-19 vaccination requirement to compete was approved by the Victoria state...
Ethiopia oo qaaday tallaabo culus oo ka dhan ah madaxa WHO
Dowladda Ethiopia ayaa si adag u dhaleeceysay madaxa hay’adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayada oo dalbatay in uusan sii hayn jagadaas. Xukuumadda Abiy Axmed ayaa cabasho rasmi ah u dirtay hay’adda caafimaadka adduunka ee...
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullahi. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladaha guud ee dalka iyo...
Qoorqoor & Max’ed Nuur Gacal oo ku laabtay, laguna soo dhoweeyey Dhuusamareeb (Sawirro)
Madaxweynaha Dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Dr Maxamed Nuur Gacal oo howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ayaa Maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Dhusamareeb ee caasimadda Galmudug. Madaxweyne Ku xigeenka mudane Cali Daahir Ciid...
Guddoomiyaha Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa soo dhoweeyay jadwalka cusub ee doorashada Soomaaliya kadib shirkii wadatashiga Qaran ee Muqdisho ka dhacay. Faki ayaa sheegay inuu dhiirigelinayo go’aanka Golaha wadatashiga Qaran ee Somalia ee ah in doorashada Aqalka Hoose si...
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa caawa Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC). Kulanka ayaa looga hadlay dhismaha Goleyaasha deegaanka ee degmooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eyl iyo sidoo kale dardargelinta...